सरकारले कृषिमा दिएको अनुदान कहाँ जान्छ ? | Chhinchhin Khabar
सरकारले कृषिमा दिएको अनुदान कहाँ जान्छ ?
१७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार २१:१६
डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री
नेपालको कृषिमा धेरै जोखिम छ । यतिधेरै जोखिम भएकै कारण कृषिलाई राज्यले संरक्षण गर्नु परेको हो । भौतिक रुपमा हेर्दा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम छ । भू–क्षय हुने, कृषि सामग्री, रासायनीक मल, भूमिको गुणस्तरमा क्षयीकरण हुँदै जाने, पानीको मुहान सुक्ने, भएका पनि व्यवस्थित नहुँने, जलवायु परिवर्तनले मौसमी बदलीमा समस्या हुँदा पानीको जोखिम बढेको छ । अन्य पनि जोखिम हुने गरेका छन् । बाली लगाउनेदेखि भित्र्याउने बेला सम्म पनि जोखिम धेरै छन । सुरक्षित भण्डारणका अभावमा उपभोक्तासम्म पुग्दा गुणस्तर खस्कने गरेको छ । अब जहाँ जहाँ जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ त्यहाँ काम गर्ने हो भनेर हामीले अभियान सुरु गरेका छौं । मौसम हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैर्नाै ।
तर अहिले बिमा गर्न थालिएको छ । माटोको गुणस्तर सुधार्ने काम भएका छन् । खाद्यान्न उत्पादनमा मूल्य तोक्ने विषयमा अगाडि काम गरेका छौं । केही खाद्यबस्तुमा मूल्य तोक्ने काम हुँदैछ । अहिले उत्पादनमा लागत बढेको छ । उत्पादनमा अनुदानका प्रकृयाहरु अघि बढेको छ । कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुमा अनुदाको सबै भन्दा बढी छ । अनुदान कृषकले नपाएको गुनासो त्यो भन्दा बढी छ । बारम्बार हाम्रो अनुदान कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्न उठने गरेको छ । किसनाको घरदैलोमा अझै पुगेका छैनन् । यो निकै चिन्ताको विषय बनेको छ ।
अहिले संघको सरकारको कार्यक्रम सबै किसानको घरमा पुग्न सकेन भनेर स्थानीय सरकार छ । अब स्थानीय तहले धेरै कार्यक्रमहरु गर्ने भनेर धेरै काम तोकेका छौं । मेरो अनुरोध स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई के हो भने तपाईहरुले सडक मात्र नहेर्नु । भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यही कृषि उपजलाई बजारिकरण गर्न बाटो चाहिन्छ । तर सन्तुलित ढंगको चाहिन्छ । तर कृषले राम्रो सामान उत्पादन नगर्ने हो भने त्यो सडकले पनि प्रतिफल दिँदैन । त्यसो हुनाले स्वास्थ्य, सेवा, कृषि, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई सन्तुलित ढंगले बजेट बिनियोजन गर्नु भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
संघीय सरकारको बजेटको ठूलो अंश स्थानीय र प्रदेशतहबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था छ । संघले गर्ने बजेटको खर्चमा कति अनुपात बजेट खर्च भयो भनेर बहुत ठूलो बहस हुने गरेको छ । संघीय संरचनाको लाभ जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि छान्ने किसान पनि लाभ लिन सक्नुपर्छ । अहिले उत्पादन भएको वस्तु मंहगो भएको छ । उत्पादन भएको वस्तुको लागत बढी भएर किसान मर्कामा परीरहेका छन् । यो बीचमा के समस्या भएको हो । समस्या उत्पादनकत्वका हो वा हामीले प्रयोग गर्ने सामाग्र वा प्रविधि के को हो ? प्रति लिटर ७०÷८० रुपैयाँसम्म पनि दुध बेच्दा कृषहरुले नाफा छैन भनी रहनु भएको छ । त्यही दुध किनेर खाने स्थिति हुँदैन ।
किनेर खान सक्ने जमात पनि चाहिन्छ । कृषि भन्दा बाहिर रहेका वा त्यही उत्पादन किनेर खान सक्ने स्थिती कसरी सृजना गर्न सक्ने ? ज्यालामा वा न्यून आय गर्ने कर्मचारी छ उसले कसरी दैनिक आधा लिटर दुध किनेर खान सक्ने हैसियत राख्दैन भने उसको क्रय शक्ति पनि बढाउन आवश्यक छ ।
यसका लागि हामीले दुई वटाकाम गर्दै छौं । यसका लागि हामीले मूल्य वृद्धिलाई एउटा सीमामा राख्ने र अर्को न्यूनतम ज्याला बढाउने योजना रहेको छ । ज्याला बढाएपछि उसले उत्पादन भएको वस्तुमा केही तिर्न सक्छ । हामीले अब क्रयशक्ति बढाउनै पर्छ । किनेर खानेको क्षमता बढाउने फनि बढाउन आवश्यक छ । हामीले निकासी गर्ने कृषि सामाग्रीमा अनुदान दिने भनेको छौं ।
अहिले कृषि उत्पादन किन मंहगो भएको हो ? रासायनीक मल महंगो भएको हो ? अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा ४७÷४८ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने रासायनीक मल हामीले १६ रुपैयाँमा अहिले बेचेको छौं । तीन गुणा बढी महंगो छ । अहिले सरकाले न्यून मूल्यमा किसनलाई दिइरहेको छ । यो कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने महत्वपूर्ण देखिएको छ । दुग्ध उत्पादन गर्ने कृषकलाई पनि अनुदान दिएका छौं । स्थानीय तहले त गाई बस्तुलाई सुत्केरी भत्ता समेत दिन थालेका छन् । तर दाना महंगो छ । यसले मासु, दुध मंहगोे हुने गरेको छ । हामी खाध्यान्न धेरै प्रयोग गरिरहेका छौं । कयिपयले आयातीत खाध्यान्न प्रयोग गरीरहेका छौं । अब हामीले घाँसपातमा आधारीत नादा पानीलाई विकास गर्न आवश्यक छ । मुलुक भित्रै खाद्यान्न उत्पादन बढाउने हो भने हामी पनि आत्मनिर्भर हुँदै जाने छौं ।
उत्पादन लागत बढाउने विषय हेर्न जरुरी छ । त्यसमा नश्लको विषय महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । नश्ल उन्नत जातको भएन भने, कृषिमा बीउ उन्नत जातको भएन भने त्यो धेरै उत्पादन हुँदैन । प्रविधि पनि आवश्यक छ । यसमा सहकारीको भूमिका पनि आवश्यक छ । कृषि उत्पादन बढाउन हामीले यान्त्रीकरणमा जानै पर्छ । यो साना किसानले एक्लै गरेर सम्भव हुँदैन । समूहमा हुनुआवश्यक छ । अनुदान एक्लै एक्लै दिँदा दुरुपयो भयो । अब हामीले सहकारीबाट जानै पर्छ । प्रविधि दिँदा पनि समूहमा पुग्न सजिलो हुन्छ । यसले लागत कम हुन्छ ।
त्यसैले सहकारीले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, बजारिकण गर्ने, अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने काममा सहयोग गर्नसक्छ । लघुबिमा सहकारीबाट अघि बढाइने छ । जोखिम व्यवस्थापनमा बीमा भूमिका महत्वपूर्णं हुने छ । कृषिमा लगानी गर्न सुरु सुरुमा बैंकमा अनिश्चय भएका थिए । बीमा राम्रो रुपमा हुने, बजार मूल्य राम्रो हुने भएपछि हामीले बैंकलाई ऋण दिनैपर्छ भनेर भन्यौं । कृषिमा राम्रो सहयोग नगर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विकास आफैमा पनि छिटो अघि बढ्दैन । यो कुरा बैंकहरुले बुझदै गएका छन् । आगामी दिनमा सहज हुँदै जानेछ ।
(अर्थमन्त्री खतिवडाले साना किसान सम्मेलनमा राखेको मन्तव्य)
Previous articleप्रादेशिक महोत्सवका लागि भारतबाट ऊँट ल्याइयो
Next articleधमाधम ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गर्दै प्रदेश सरकार
चिनियाँ राजदूतले दिए दाहाललाई बधाई
नेपालगन्जको पुष्पलाल चोकमा फेला परेको बम डिस्पोज
जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका ११ जनाद्वारा आत्मसमर्पण